Konecranes 'pre-kutengesa uye shure-kutengesa masevhisi ari kuita chaizvo. - China Qingdao CO-NELE Boka
Konkriti Boom Pump Rori
Diki Rakanaka Dombo Pombi
Concre te chisanganiso Pump
Concrete pakugovera Boom
Konkrete Yekubatanidza Chigadzirwa
Concrete chisanganiso Truck
Konecranes 'pre-kutengesa uye shure-kutengesa masevhisi ari kuita chaizvo.
Jiangxi mutengi, Dongfeng 30m pombi yerori
Munguva pfupi yapfuura, kambani yakagamuchira runhare kubva kuna Mr. Zhang kubva kuJiangxi uyo akatenga pombi yekongiri kubva kukambani yedu mwedzi mitanhatu yadarika. Parunhare, akataura kuti aizotenga imwe pombi yekongiri gore rino.
VaZhang vaishandira kambani inokweretesa. Akatenga kongiri yepombi yekongiri kubva kukambani yedu mwedzi mitanhatu yadarika. Sekureva kwaVaZhang, nyika yakacherekedza kuvaka kumaruwa mumakore achangopfuura. Kuvakwa kwedzimba kumaruwa hakusati kuri kudiki sekure kwadzaimboita. Chakanga chiri chivako chidiki, asi nekuda kwekushomeka kwemanheru, zvaive zvisina kunaka kuunza simende kunzvimbo yepamusoro-pasi. Mwaka wadarika, nepfungwa yekuyedza, ndakatenga rori yeKonecrale kongiri pombi ndikairenda kumutengi. Mutengi akazotaura kuti zvaive zvakanaka kwazvo. Iko kuchengetedza nguva, kushanda-kuchengetedza uye kwakaringana. Iyo chete yekudzoka ndeyekuti dzimwe nguva mota inobhadharwa neimwe kambani.
Naizvozvo, VaZhang vakasarudza kuti vatenge mamwe maviri pakupera kwegore. VaZhang vakati vanogona kutanga bhizinesi ravo mushure megore rinotevera. Chinhu chakakosha ndechekuti haafanire kunetseka nezvekudzoka kwenguva refu, nekuti kudiwa kwacho kwakakura, saka izvozvi Bhizinesi mirairo yakaiswa tese kumusoro, pamwe neKonecranes 'pre-kutengesa uye nemashure-ekutengesa masevhisi ari kuita kwazvo, uye iwe' t ndinofanira kunetseka nezvematambudziko zvachose. Ingosarudza Konecranes.
Konile inzvimbo yakakura-yemhando yekuvaka michina bhizinesi inobatanidza kutsvaga kwesainzi, kugadzira, kutengesa uye mushure mekutengesa. Kunyanya kugadzirwa kwemakombi epombi yekongiri, michina yekuparadzira kongiri, mapombi ekupuruzira mvura, mapombi akasimudza marori, mapombi emabwe akanaka, mapombi espombi, pombi diki dzepombi, pombi diki dzakaiswa nematuru, kusanganisa pombi yetiraki, , inopfuurira mapombi Kugadzira michina uye michina yakadai seya feeders, sludge pombi, uye emigodhi yekongiri yemigodhi ndeye zvemhando yepamusoro uye yakanakisa mhando. Gamuchirai vatengi vatsva uye vekare kuti vauye kuzobvunza uye kurongeka!
Nguva yekutumira: Chivabvu-19-2020
Welcome to paemail bob@conele.com uwane ruzivo
Konecranes 'pre-kutengesa uye shure-sal ...
Ndeupi musiyano uripo wepombi peturu ...
Kugadzirisa ruzha nekongiri pombi t ...
Mushure kongiri pombi Rori iri dzakamiswa add ...
Zvokuita kana lubrication pfungwa rapera ...
Celia: Mhoroi, Tikugashirei kushanyira webhusaiti yedu. Inzwa wakasununguka kutibata nesu
Celia: Ndeupi muchina waunoda?
No Thanks Chato Zvino